Ukuchithwa kweNew Jersey - i-NJ kunye ne-NY yearhente yeZindlu, eKhangela, uKhuselo lweNdawo yokuTyhilwa kunye namaGqwetha asebambisayo
ikhaya / Blog / New Bankruptcy
Aprili 1, 2020 Ukuchithwa, New BankruptcyUshiye uluvoAndres Cardenas
Intlanganiso yaBabolekisi malienxalenye ebalulekileyo yenkqubo yokubhengeza ....
January 2, 2020 Ukuchithwa, New Bankruptcy, New York Bankruptcy, INew York Foreclosure DefenseUshiye uluvoAndres Cardenas
Zintathu iindidi zokuzicima okwenziwa ngokuzithandela okunga fayiliswayo. Isahluko 3, 7, okanye 11. Kukwakho nesahluko se-13 sokuchithwa kwabalimi bakaFama kunye noMlobi wosapho. Kwaye ...
I-New Jersey igqithisa iBhili yokuCacisa ukuHlola eNtsha
Ngamana 2, 2019 Ukuchithwa, New Bankruptcy, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York2 CommentsAndres Cardenas
INew Jersey idlulisa iNgcaciso eNtsha yokuCalulwa kweNdlela ekuHlanganyeleni kunye nezinye iiBhili ezisisiTyhila
I-New Jersey Bill A664 ejongene ngqo nokuthethelelwa ngenkqubo yokuxelwa kwangaphambili yapasiswa ngo-Epreli 29, 2019. Isenzo "siyasebenza ...
Ukuthathelwa ingqalelo kuthatha ixesha elingakanani kwi-New York State?
Disemba 4, 2018 New Bankruptcy, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York, Intengiso yeSheriffUshiye uluvoI-Veer Patel
Ixesha leNtshukumo eNtsha yokuQutyulwa kweNtshukumo
Kuthatha ixesha elingakanani ukubonwa kweNew Jersey? Ewe, impendulo ixhomekeka ekubeni ubuze umbuzo nini. Ukuba ubuzile i-5-6 kwiminyaka eyadlulayo, ibinokuba yiminyaka. Ngoku uqoqosho ngokunxulumene ...
Ukupheliswa kwemali ukuphelisa njani ukugxothwa eNew Jersey?
Oktobha 30, 2018 Ukuchithwa, New Bankruptcy, Ukugxothwa eNtsha kweJerseyUshiye uluvoLazaro Cardenas
Isahluko se-13 ukubhengezwa kwamatyala kuya kuXELISA ukugxothwa eNew Jersey kokungahlawulwa kweRhafu.
Isahluko se-13 sokugcwalisa ukufakwa kwamatyala kuphela ekumele ukugxotha ngenxa yokungaphumeleli komqeshi ukuhlawula irente. Ifayilisha yecandelo le-13 ukubhengezwa kwamatyala amatsha eNtsha ...
Nokuba uyakholelwa ukuba awungekhe ...
Ngaba isicelo sokurhoxisa isicelo seNkundla yeSithili saseNew York esigxotha isikhalazo sakhe siyala ukwenqatshelwa kwesicelo sokuchongwa kwetyala?
Septemba 24, 2018 New Bankruptcy, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Ukuzibonakalisa kukhuselo kunokusebenza kumanqanaba amaninzi eeNkundla eNew Jersey
Abantu abachazwe kwiPhondo laseNew Jersey bafanele banike ingqalelo eyodwa yetyala lakutsha nje leNkundla yeziBheno yase-United States kwisekethe yesithathu ....
NJ igqwetha lezomthetho
Septemba 10, 2018 New Bankruptcy, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoUDerek Soltis
Le ntengiso yegqwetha.
Nokuba ungunobhala kwiYunivesithi yaseClementon ejongene neembonakalo zangaphambili okanye umqeqeshi wobomi ebomini Passaic County NJ. Ukuba uhlala kwi-East Brunswick ye-zip code 07728. Ukuba ujongene nokuchazwa okanye ukubhengezwa njengongenamali ...
Sebenzisa ukungabinamali ukuphelisa uninzi lwamatyala kwi-NYC Taxi Medallion
Septemba 5, 2018 New BankruptcyUshiye uluvoUDerek Soltis
Nabani na olandela imarike yetax yaseNew York City angabona ukuba ezantsi ziwe phantsi kwimarike. I-Medallions yayidla ngokuthengisa ngaphezulu kwesigidi seedola, kodwa ngoku bayithengisa ngemali engaphantsi kwe- $ 160,000. Jonga uluhlu lweTaxi medallion
Kuthetha ukuthini oko xa ufumana “iNtetho yeTrasti kuQinisekiso lweSicwangciso”?
Agasti 27, 2018 Ukuchithwa, New Bankruptcy, New York BankruptcyUshiye uluvoUDerek Soltis
Ngaba usifumene "isiqinisekiso seTrasti kuQinisekiso lwesiCwangciso" sokungabinamali kwakho?
Oku kungapela ukuphela kwetyala lakho, okanye kunokuba yinto nje ekuthini isicwangciso sakho siqinisekiswe. Ukuba ungenzi nto konke konke, phantse ...
Wamkelekile kwiWebhusayithi yethu yoKhuselo lweNqanawa
Agasti 22, 2018 New BankruptcyUshiye uluvoUDerek Soltis
Mholweni. Igama lam nguDerek.
Wamkelekile kwi-Patel, Soltis kunye neCardenas, iwebhusayithi. Ndingomnye wamaqabane kwinkampani yezomthetho.
Namhlanje ndingathanda ukukuxelela ukuba sizama ukwenza ntoni ngale webhusayithi ukukunceda. Inokuba ufike kule ...
IJersey entsha ikhokelela e-US kwiiNgcaciso zeNgcaciso
Agasti 8, 2018 Ukuchithwa, New Bankruptcy, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York1 CommentAndres Cardenas
Ukutyhilwa okusha kweJersey kuhlanga loLuntu kwiiKota zokuqala ze2 ze2018
I-Atom yedatha yeziSombululo ichaze ukuba izinga lokuxelwa eNew York laliphezulu kunakweliphi na elinye ilizwe hayi kwisiqingatha sokuqala se-2018, nakwesesibini ...
Yiba neGqwetha eliPhonononge ukhetho lwakho kunye nawe mahala
Ngamana 28, 2018 New Bankruptcy, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York, New York BankruptcyUshiye uluvoUDerek Soltis
Nxibelelana nathi kwaye siya kukwenzela izinto ze-3:
3. Siza kulungiselela ...
Ukulungiswa kwetyala elitsha laseJersey emva kokuBhanga-Amanyathelo e-7 ukuya kwi720 Score yeTyala
Disemba 12, 2017 Ukuchithwa, New Bankruptcy, New York Bankruptcy1 CommentUDerek Soltis
Sisebenzisene ne7 STEPS TO 720 CREDIT SCORE ukunceda abaxumi bethu ukulungisa uMrhumo wabo emva kokugcwalisa ukubhengezwa.
Nawuphi na umntu obhengeze ngokungabinamali unokufaka kwifayile ukubhengezwa kwe-7 okanye u-13 ukubhengezwa, kodwa bangaphi abazama ...
IziBonelelo kunye neMibango enokubakho yokuNgabinamali ngelixa ibonakaliswa eNew Jersey echazwe yi-NJ onelayisensi yokuBhangisa / iNkundla yokuKhuselwa engafunekiyo
Septemba 23, 2017 Ukuchithwa, New Bankruptcy1 CommentUDerek Soltis
Ngaphambi kokuba ufayilishe ukubhengezwa njengongenamali ngokubonisana negqwetha le-NS Bankruptcy. Kwi-Ofisi yoMthetho kaPatel noSoltis sinikezela ngothetha-thethwano wasimahla kuye nabani na ojonga ukubhengezwa njengongenamali. Nokuba usayina nathi okanye akunjalo, siya kugqogqa zonke iinketho zakho kunye ...
Sebenzisa igqwetha elitsha lokuBhengeza imali kwi-Jersey ukuze likuncede ukuba unike ifayile yokubhanga ukuze ubone ukuba kutheni kukho impumelelo ye-95% kwisahluko se7
Julayi 8, 2017 Ukuchithwa, New Bankruptcy, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoUDerek Soltis
Ukuba ucinga ngokugcwalisa i-akhawunti yokungabinamali ngeGqwetha laseNew Jersey lokuGwetywa mahala.
Amaxesha amaninzi abantu baneengxaki kwaye bacinga ukuba ukungabinamali kunokuba yimpendulo yabo. Thetha nomnye wabameli be-NJ Bankruptcy yethu ...